Cagaarshow C - Wikipedia
Waa maxay astaamaha cagaarshowga nooca C? Xaalado badan dadka qaba cagaarshowga nooca C waxaa laga yabaa inaysan dareemin. Dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inay dareemeen jiro hargabka oo keli ah oo aan u baahneyn daaweyn. Marka ugu horeysa ee aad qaado feyraska cagaarshowga nooca C waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii arkaan in kaadidoodu u ekaato madow indhahooda iyo maqaarkooduna waxaa laga yaabaa inay noqdaan jaale. Astaamahani waxaa laga yaabaa inay ku baaba’aan toddobaadyo yar laakiin tan micnaheedu ma aha in infekshinkii isna uu sidoo kale baxay. Haddii aad qabto astaamaha cagaarshowga, ama aad u maleynayso in khatar lagu geliyey, waa inaad la tashataa dhakhtarkaaga. Baaritaanka dhiiga ayaa sheegaya inaad qabto cagaarshowga nooca C. marka huxitaanka beerku jiro in ka badan lix bilood jirada waxaa loogu yeeraa cagaarshowga nooca C ee soo noqnoqda (chronic hepatitis C). Astaamaha cagaarshowga nooca C ee soo noqnoqda waxaa laga yaabaa inay noqdaan:
Daal yar ilaa mid daran
Rabitaanka cuntada oo kaa yaraada
Feeraha dhexdooda oo ku xannuunta
Xannuun isgoysyada ah
Xannuunka beerku ma khatarbaa nooca C? In ka badan boqolkiiba 70% dadka qaba waxaa laga yaabaa inay sii wadaan feyraska dhiigooda oo ay noqdaan kuwa wakhti dheer sida ama uu ku soo noqnoqdo. Waxaa la rumeysan yahay in ilaa 15% ilaa 20% oo dad ahi oo ah kuwo sida xannuunkan oo uu ku soo noqnoqdo uu ku dhici doono cirrhosis, oo ah nabar ku dhaca beerka. Tan waxaa laga yaabaa inay qaadato 20 sanno inuu ku koro. Sannado ka dib, tiro yar oo dad ah oo qaba cirrhosis ayaa waxaa laga yaabaa inay qaadaan kansarka beerka. Dadka sida cagaarshowga nooca C waxay qabayaan infekshinkaan noloshooda oo dhan waxayna ku faafin karaan feyraska dadka kale haddii aysan taxadarin.
Sidee loo faafiyaa cagaarshowga ee nooca C? Dhiig Feyraska cagaarshowga ee nooca C waxaa laga helaa dhiiga qofka qaba. Haddii dhiig leh uu galo qof kale dhiig mareenkiisa, waxaa laga yaabaa inuu qofkaasi qaado feyraska. Habka ugu caamsan ee ay dadku ku qaadi karaan cagaarshowga nooca C waxaa weeye wadaaga qalabka daawada ee laysku duro sida irbadaha silingayaasha iyo qaadooyinka. Xannuunka beerka waxaa sidoo kale oo faafin karaa:
Isticmaalida taatuuga iyo qalabka jirka laysaga durduro oo aan si wanaagsan loo nadiifin oo aan jeermiga looga dilin.
Isticmaalka caddeyga, makiinada laysku xiiro ama shey kasta oo shakhsiyeed oo qaadi kara dhiig qof jiradan qaba.
Hal qof dhiigii oo gaaraya meel dilaacsan oo qof kale.
Dhiig ku shubidda
Galmada Khatarta aad ku qaadi kartaa xannuunka beerku nooc C aad ayey ku yar tahay wakhtiga galmada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inay khatartu ka weyn tahay haddii uu jiro dhiig, tusaale xilliga caadada. U gudbinta Hooyadu ilmaha Hooyooyinka qaba waxaa laga yaabaa inay wakhtiyo dhif ah u gudbiyaan ilmahooda cagaarshowga nooca C intay uurka leeyihiin amase markay dhalayaan, khatartu waa yartahay uu ilmuhu uga qaadayo feyraska nuujinta.
Sidee baan isaga ilaalin karaa qaadida cagaarshowga nooca C? Wakhtigan xaadirka ah ma jiro tallaal lagaga hortago inuu qofi qaado cagaarshowga nooca C.
Hala wadaagin cadey qofna, makiinada laysku xiiro, soofaha cidiyaha, ama maqaska ciddiyaha maadaama ay kuwani jeexi karaan jirka oo ay qaadsiin karaan.
Haddii aad ku lug leedahay jir daldaloolin, xardhid,koronto isticmaalid ama akubanjarka, had iyo jeer hubi in sheyga daloolinaya maqaarka uu nadiif yahay oo jeermiga laga dilo wakhtiga isticmaalka.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadka waa inay isticmaalaan awaamiirta xaddidaada infekshinka ee caadiga ah.
Meel alaale meeshii suurto gal ah, isticmaal galoofyada gacanta ee halka mar la isticmaalo haddii aad qof siiso gargaarka degdeg ah ama aad nadiifiso dhiig ama dheecaanka dhiiga.
Isticmaal canjirka galmada wakhti kasta oo aad sameyso galmo. Dadka qaba cagaarshowga ee nooca C ee xiriirka wakhtiga dheer ee xasiloon leh waxay u baahan yihiin inay tixgeliyaan isticmaalka kondhomka oo ay kala hadlaan dhakhtarkooda.
Had iyo jeer dhaq gacmahaa ka hor duritaanka iyo ka diba.
Waligaa ha wadaagin irbado iyo saliinge, qaadooyin, alaabta lagu qaado dhiiga, filtarada, tourniquets iyo biyaha kuwan waxaa laga heli karaa farmashiilayaasha.
Isticmaal galoofyada halka mar la isticmaalo isticmaal waraaqaha tuwaalka ah ee bacda ku jira.
Ku dhaq meesha biyo diiran iyo jeermi dile, biyo raaci oo qalaji.
Ku rid galoofiska la isticmaalay bac balaastig ah, xir kuna rid sanduuqa qashinka.
Ku dhaq gacmaha biyo saabuun leh oo diiran dhammaana qalaji.
Baaritaan ma leeyahay Cagaarshowga nooca C? Haa. Sameynta baaritaanka jirka lidka ku ah ayaa wuxuu kuu sheegayaa inaad qabto xannuunkan iyo in kale. waxaa laga yaabaa inay qaadato laba ilaa saddex bilood (mar marka qaarkood wakhti ka dheer) laga bilaabo wakhtiga aad qaaday ka hor intaan baaritaanka dhiigi uusan sheegin lidka jirka ee Cagaarshowga nooca C. haddii aad qabto cagaarshowga nooca C baaritaanka jirka lidka ku ah ayaa waxaa meynaya shaybaarada ku takhasusay oo sameyn kara baaritaan dheeraad ah oo la yiraahdo cagaarshowga ee C PCR si loo go'aamiyo haddii fayrasku weli ku jiro dhiigaaga ama beerka.
Maxaan sameeyaa haddii aan qabo cagaarshowga nooca C? Waxaad yareyn kartaa qaadashada aalkolada, ilaalin karnaa qaadashada cunto isu dheeli tiran, ilaalina caafimaadkaaga guud. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa:
La tasho dhakhtarkaaga oo la soconaya xaaladaada oo haddii ay lagama maarmaan tahay kuu diraya dhakhtar takhasus leh.
Iska tallaal feyrasyada xannuunka beerka ee kale ( oo ah xannuunka beerka nooca A iyo B).
Kala hadal xaaladaada daryeelaha caafimaadkaaga markaad lagugu sameynayo wax kasta oo ah nidaam caafimaad iyo ilkaba.
Si dhameystiran u wada dabool meeshii ku dilaacsan ama nabar faashad aan biyo gelaynin.
Samee had iyo jeer galmo ammaan ah
Ku deeqin dhiig iyo xubin jirkaaga ah toona.
Wadaagin qalabka laysku duro.
Wadaagin waxyaalaha shakhsiyeed sida cadayada ama makiinadaha.
cagaarshowga nooca C daawo ma leeyahay? Isku dar cusub oo oo ah daawooyinka interferon iyo ribavirin ayaa si aad u hagaajiyey natiijada dadka qaba cagaarshowga nooca C. daaweyntan waxay ka caawin kartaa inay yareyso huritaanka beerka waxayna fayreska baabiin kartaa dadka boqolkiiba 30 ilaa 65%. Waa muhiim inaad la hadasho dhakhtarkaaga.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cagaarshow_C&oldid=156907"
Last edited on 14 May 2016, at 09:41
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 May 2016, marka ee eheed 09:41.